Liisaska | June 2022
Ha noqoto adiga YouTubers, xayeysiiyaasha, ama dadka caanka ah; qof walbaa wuxuu ku jiraa Reddit. Halkan waxaan ku liis gareynay hoos-u-dhigyada ugu wanaagsan ee la raacayo 2020.
Maanta, waxaad haysataa boodhadh aad u tiro badan oo z390 ah oo suuqa yaalla oo adkayd inaad doorato midka ugu fiican. Marka, Halkan waxaan ku taxnay Motherboard-yada ugu fiican Z390.
Beddelka DropBoxyada Ugu Fiican ee Aad Isku dayi karto 2020
DropBox wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku keydiso feylashaada muhiimka ah dariiqa dariiqa. Halkan waxaan ku taxnay 14 adeegyo noocan ah. Bal u fiirso tan beddelka sanduuqa ugu fiican.
Magacyada Kahoot - Cool, Magaca Fikradaha Fikradaha ah ee Aad Ka Heli Karto
Ma Raadineysaa Magacyo Qabow? Waa kuwan Qaar Ka Mid Cool, Fikradaha Magaca Qosolka badan. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa Generators-keena Magaca Kahoot.
Beddelaadaha Rabb.it (2020) - Top 6 Shabakado isku mid ah
Rabb.it waa barnaamij u sahlaya dadka isticmaala inay si wada jir ah u daawadaan filimada iyo bandhigyada. Way ku habboon tahay dadka isticmaala ee doonaya inay khibrad wanaagsan la yeeshaan asxaabtooda. Qufulka caalamiga ah ayaa kordhiyay baahida loo qabo codsigan oo kale. Way ku habboon tahay dadka isticmaala ee ku nool meelo fogfog. Waad isku dhejin kartaa durdurrada si aad uhesho khibrad weyn. Adeeggu wuxuu la shaqeeyaa barnaamijyo badan sida Netflix, Youtube, iyo kuwa kale oo badan. Adeeggu wuxuu sidoo kale laga heli karaa dhammaan qalabka kala duwan ee la heli karo. Dhawaan madasha ayaa aragtay magac bixin. Waxay hadda loo yaqaan Kast. Waxaad kuheli kartaa khibrad weyn
Top 10 Goobaha Sida Craigslist (2020)
Craigslist ayaa ah meesha ugu badan ee dadku tagaan marka ay rabaan inay wax ku iibiyaan ama ku iibsadaan alaabada la isticmaalay gudaha. Halkan waxaan ku taxnay 10 Meelood oo la mid ah sida Craigslist.
Beddelaadaha Qoraalka ee ugu Fiican (2020) - Bilaash & Bixin
Nasiib darrose, Qoraal-hawleedku hadda ma shaqeynayo. Sidaa darteed waxaan soo qaadanaynaa qaar ka mid ah beddellada qoraalka ee ugu wanaagsan si shaqadaadu u fududaato.
Torrentz2.eu Domain Hakinta - Beddelka Ugu Fiican (2020)
Raadinta si aad u hesho Torrentz2.eu? Hagaag ma furi kartid! Domain-ka waxaa laga joojiyay ICANN. Halkan waxaan ku taxnay Beddelka ugu Fiican ee isku mid ah.
Qiimaha VPN Black Friday 2020 - Ku dhowaad 90% Sicir-dhimis (La xaqiijiyay)
Wax soo iibsiga VPN Black Friday waa wax laga naxo oo laga naxo. Waa inaad weli ka fekereysaa dhammaan xulashooyinkaan, kuwaas oo VPN la doorto.
daawo dhammaan bandhigyada tv -ga onlayn
websaytyada filimada bilaashka ah isma qorin
ku soo dejiso aflaanta google kumbuyuutarka
filimaan bilaash ah oo aan soo dejin ama is qorin
bilaash u ah dhammaan (taxanaha tv -ga)
sida loo rogo fiidiyaha youtube